फेसबुक कथाहरू multiple अनुयायीहरू ▷ 🥇 मा बहु फोटोहरू कसरी थप्ने
हाम्रो जीवन कथाहरूको भरिएको छ, र हामी ती मध्ये केही अनलाइन पनि पोष्ट गर्छौं। तर कहिलेकाँही, सबै चीज एकल फोटो वा भिडियोको साथ व्यक्त हुँदैन। एक भन्दा बढी कथा थपेमा मद्दत गर्दछ। हामी तपाईंलाई भन्छौं कसरी फेसबुक कथाहरूमा बहु फोटोहरू थप गर्ने र मेसेन्जर कथाहरू।
जबकि फेसबुक र मेसेन्जरका कथाहरूले फरक सुविधाहरू प्रस्ताव गर्दछ, ती मध्ये एकलाई पोस्ट गर्दा अर्कोमा स्वचालित रूपमा प्रकाशित हुन्छ। यसले हामीलाई अन्य प्लेटफर्ममा पुन: प्रकाशनको समस्याबाट बचाउँछ। तर के हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो कथामा दोस्रो फोटो वा भिडियो थप्न चाहानुहुन्छ? त्यो कसरी गर्ने?
ठिक छ, तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ। यहाँ हामी तपाइँलाई फेसबुक स्टोरीहरूमा बहु फोटोहरू कसरी थप गर्ने भन्ने कुरा बताउँदछौं, दोस्रो फोटो वा भिडियो तपाइँको फेसबुक र मेसेन्जर कथामा।
फेसबुक पुस्तकको इतिहासमा दोस्रो फोटो थप्नुहोस् (मोबाइल अनुप्रयोगहरू)
फेसबुक कथाहरूमा धेरै फोटोहरू कसरी थप्ने भन्ने बारे तीन तरिकाहरू छन्।
1 विधि: ईतिहासमा थप्नुहोस् बटन प्रयोग गर्नुहोस्
जब तपाइँ तपाइँको कहानीमा पहिलो छवि वा भिडियो थप्नुहुन्छ, फेसबुक अनुप्रयोगको गृह स्क्रिनमा फिर्ता जानुहोस्। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि पुरानो स्टु टु स्टोरी बटन अझै छ। यसलाई दोस्रो फोटो थप्न ट्याप गर्नुहोस् र पोस्ट गर्नुहोला जस्तो तपाईले पहिले गर्नुभयो। त्यस्तै, यदि तपाइँ थप थप्न चाहानुहुन्छ भने प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
एक्सएनयूएमएक्स विधि: प्रकाशित कहानीको एड् बटन प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँको प्रकाशित कथा हेर्दै, यदि तपाइँ अधिक फोटोहरू थप्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, फेसबुकले पनि यसको लागि विकल्प प्रदान गर्दछ।
त्यसो गर्न, प्रकाशित गरिएको कहानी खोल्नुहोस् तपाईंको कहानी फेसबुक गृह स्क्रिनमा ट्याप गरेर। त्यसपछि प्रकाशित कहानीको तल एड बटनमा ट्याप गर्नुहोस्।
सुझाव: माथीको स्क्रीनशटमा हाइलाइट प्रतिमा हेर्नुहोस्? इन्स्टाग्राममा जस्तै, तपाईं फेसबुकमा हाइलाइटहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
नयाँ फोटो क्याप्चर गर्नुहोस् वा क्यामेराको शटर बटनको छेउमा ग्यालरी / क्यामेरा प्रतिमा थिचेर पुरानो अपलोड गर्नुहोस्।
3 विधि: फेसबुक क्यामेरा प्रयोग गर्नुहोस्
थप कथाहरू थप्ने अर्को तरीका भनेको फेसबुक क्यामेरा प्रयोग गर्नु हो। त्यसका लागि, फेसबुक अनुप्रयोगको माथिल्लो बायाँ कुनामा अवस्थित क्यामेरा आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। यहाँ नयाँ फोटो लिनुहोस् वा ग्यालरीबाट एउटा चयन गर्नुहोस् र यसलाई बढाउनुहोस्। त्यसो भएपछि, तपाईंको कहानी विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस् तपाईंको कहानीसँग सिधा साझेदारी गर्न वा साझेदारी गर्नुहोस् तपाईंको विकल्पको छेउमा अर्को विकल्प (अर्को स्क्रिनमा)।
फेसबुक (पीसी) को इतिहासमा बहु कहानीहरू थप्नुहोस्
डेस्कटप र ल्यापटप अनुप्रयोगको लागि फेसबुक कथाहरूमा बहु फोटोहरू कसरी थप्ने भन्नेमा दुई तरिकाहरू छन्।
1 विधि: तपाइँको कहानी विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
फेसबुक वेबसाइट खोल्नुहोस् र तपाईंको कहानी बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईंले हालसालै पोष्ट गर्नुभएको कथा खोल्दछ। प्रकाशित कथामा, तपाई आफ्नो कहानी बटनमा थप्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
फेसबुक ले तपाईंलाई सिर्जना पोष्ट पप-अप विन्डोमा लैजान्छ। अब तस्विर थप्नुहोस् र साझेदारी बटनमा थिच्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कथा समाचार फीडको सट्टा चयन गरिएको छ।
2 विधि: सन्देश बाकस सिर्जनाबाट थप गर्नुहोस्
तपाईले आफ्नो अवस्थित प्रकाशित कथाहरू बिना नै धेरै कथाहरू थप्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि वस्तुस्थिति बक्स वा त्यस क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोस् जुन "यहाँ केहि लेख्नुहोस्।" एक पप-अप विन्डो देखा पर्नेछ। अब एक फोटो जोड्नुहोस् र तपाईंको कहानी विकल्प चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि सेयर बटन थिच्नुहोस्। यदि तपाइँ न्यूजफीड छनौट गर्नुहुन्छ, फेसबुकले तपाइँको भित्तामा पोष्ट गर्दछ। त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
यस विधिका साथ तपाईको कथामा एक पटकमा धेरै छविहरू थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्न, एकको सट्टा बहु फोटोहरू चयन गर्नुहोस् वा केवल तपाईंले चयन गर्नुभएको छविको छेउमा प्लस (+) आइकन क्लिक गर्नुहोस्।
फेसबुक सन्देशवाहकमा बहु स्टोरीहरू थप्नुहोस्
यदि तपाईं मेसेन्जर फेसबुक र मेसेन्जरमा कथाहरू थप्न प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, मेसेन्जर अनुप्रयोगबाट एक भन्दा बढी कथा पोष्ट गर्न यहाँ दुई तरिकाहरू छन्। हामी तपाईंलाई फेलबुक र मेसेन्जर कथाहरूमा धेरै फोटोहरू थप्न कसरी समाधान गर्दछौं।
नोट: मेसेन्जर डेस्कटप संस्करणले कथाहरू समर्थन गर्दैन।
तपाईंले आफ्नो पहिलो फेसबुक वा मेसेन्जर कहानी पोष्ट गर्नुभएको होस्, तपाईं फेसबुक मेसेन्जर सुरू गर्दा तपाईको कथा प्लस साइन विकल्पको साथ देख्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि क्यामेरा बटन प्रयोग गरी नयाँ फोटो खिच्नुहोस् वा अवस्थित छनौट गर्नुहोस्। अन्तमा, यो प्रकाशित गर्नुहोस्।
2 विधि: मेसेन्जर क्यामेरा प्रयोग गर्नुहोस्
यो गर्नका लागि, आफ्नो फोनमा मेसेन्जर अनुप्रयोग सुरू गर्नुहोस् र शीर्षमा क्यामेरा प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको कहानी अपलोड गर्नुहोस् र सामान्य को रूपमा प्रकाशित गर्नुहोस्।
कसरी विभिन्न स्टोरीहरू हेर्नुहोस्
जब तपाईं फेसबुक वा मेसेन्जरमा एक भन्दा बढि कहानी थप्नुहुन्छ, तिनीहरू सबै क्रममा स्लाइड शोको रूपमा खेल्दछन् जुन तपाईंले क्रमबद्ध गर्नुभयो। हालमा, तपाइँ तिनीहरूलाई पोस्ट पछि तिनीहरूको अर्डर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। कथालाई द्रुत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि अर्को कथामा जानको लागि स्क्रिनको दायाँ छेउमा ट्याप गर्नुहोस्। बाँया किनारामा ट्याप गर्नाले तपाईंलाई पछिल्लो कथामा फिर्ता लैजान्छ।
अतिरिक्त सल्लाह 1: प्रत्यक्ष फेसबुक पुस्तक क्यामेरा पहुँच थप गर्नुहोस् स्क्रीनमा।
यदि तपाईंलाई फेसबुक क्यामेराले प्रदान गर्ने प्रभावहरू र फिल्टरहरू मनपराउँदछ भने, तपाईं द्रुत पहुँचको लागि तपाईंको फोनको गृह स्क्रिनमा यसको सर्टकट थप्न सक्नुहुन्छ।
यो गर्न, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
1 चरण: तपाईंको फोनमा फेसबुक अनुप्रयोग सुरू गर्नुहोस्।
2 चरण: माथिको बायाँ कुनामा क्यामेरा आइकन ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि शीर्षमा सेटिंग्स आइकन हिट गर्नुहोस्।
3 चरण: क्यामेरा सर्टकट थप्नुहोस् मा ट्याप गर्नुहोस्। एक पप-अप विन्डो देखा पर्नेछ। पुष्टि गर्न ठीक छ मा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाईको फोनको होम स्क्रिनमा जानुहोस्। तपाईं त्यहाँ क्यामेरा अनुप्रयोग पाउनुहुनेछ। सुरू गर्न यसलाई ट्याप गर्नुहोस्। तपाईं यसलाई तपाईंको फिड र स्टोरीमा फोटो पोस्ट गर्न वा तपाईंको फोनमा बचत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
बोनस टिप 2: फेसबुक पुस्तकको गोपनीयता कन्फिगरेशन परिवर्तन गर्नुहोस्
तपाईंको फेसबुक कथाको लागि दर्शक परिवर्तन गर्न, यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
1 चरण : फेसबुक अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र शीर्षमा तीन बार आइकन ट्याप गर्नुहोस्।
2 चरण : सेटिंग्स र सेटिंग्स पछ्याई मेनूबाट सेटिंग्स र गोपनीयता चयन गर्नुहोस्।
3 चरण : तल स्क्रोल गर्नुहोस् र कथा सेटिंग्स ट्याप गर्नुहोस्। कथा गोपनीयता चयन गर्नुहोस् र श्रोता छान्नुहोस्।
हामी थप सुविधाहरू चाहन्छौं
तपाईंको कहानीमा बहु फोटो थप्न नेटिभ तरिका प्रस्ताव गर्ने इन्स्टाग्रामको विपरीत, दुबै फेसबुक र मेसेन्जरको मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा त्यो सुविधाको अभाव छ। म वास्तवमै सुविधा प्राप्त गर्न चाहन्छु किनकि म मुख्यतया अनुप्रयोग पोष्ट गर्छु कथा लेख्नका लागि।
खराब चीजहरू पन्छाएर, फेसबुक र मेसेन्जरले कथाहरूमा अन्य शान्त सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, मेसेन्जर कथाहरु तपाइँ पुराना छविहरु को लागी अनुहार फिल्टर लागू गर्न को लागी अन्य सुविधाहरु को लागी अनुमति दिन्छ।